Maxkamadda oo ammar ay soo saartay ku sheegtay in macaalimiinta hawlgabka ah lacagahooda la siiyo – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamadda oo ammar ay soo saartay ku sheegtay in macaalimiinta hawlgabka ah lacagahooda la siiyo
Maxkamada sare ee countiga Nakuru ayaa ku ammartay agaasimaha lacagaha hawlgabka ah in u fasaxo lacago lagu sheegay in ay yihiin 1.5 bilyan oo kamid ah 42.3 bilyan ay doonayen macaalimiinta hawlgabka noqday in lagu siiyo muddo dhan 30 bari gudahood.
Ammarkaas ayaa waxa bixisay xakiinada maxkamadaas Janet Mulwa xili u gaasimaha ka soo hormuqday maxkamada waxana u Nyakutu sheegay in ay lacagaha ay maxkamadda ku ammartay in u bixiyo ay hadda uun soo gaaren xafiskiisa kadib marki ay ka heleen wasaarada maaliyada dalka.
Xakiinada ayaa waxa ay ka digtay laanta bixisa lacagaha hawlgabka ah haddi ay ka soo bixi weyso heshiiska ah in ay macaalimiinta hawlgabka ah lacagohooda ay siiso in talaabo la qaadi doono.
Mr Nyakutu ayaa ka soo hormuqday maxkamadda kadib marki 26-da biisha July warqad lagu soo xiri lahaa loo jaray waxana agaasimaha warqadaas loo jaray kadib marki isaga iyo qareenka guud ee waxda bixisa lacagaha hawlgabka ah Njee Muturi ay ka soo hormuqan waayen si ay uga jawaaban kiiska ka dhanka ah ee ah in ay macaalimiin tiradooda lagu sheegay 52,000 oo shaqada ka fariistay ay lacagahooda hawlgabnimo oo ah 42.3 bilyan ay ku guuldareesten in ay siiyan.
Maxkamadda ayaa waxa ay ka dooneysay labadan masuul in ay faahfaahin ka bixiyaan sababta dhabta ah ee ay lacagahaas u bixin waayen iyo waxa ay ugu hoggaansami waayen ammarka maxkamadda Supreme court-ka ee ahaa in macaalimiintaas la siiyo lacagahooda hawlgabnimo.
Maxkamadda ayaa waxa ay shalay mudada lagu soo xiri lahaa qareenka guud ee waxda ay kordhisay kadib marki u malinta shalay iska soo xadirin waayay kalfadhiyada maxkamadda.
Mr Nyakutu ayaa maxkamadda u sheegay in xafiskiisa u wasaarada maaliyada ka helay lacag dhan 1.5 bilyan 25-ta June uuna lacagahaas ugu shubi doono macalimiinta sanduqyada ay bangiyada ku leeyihiin mudo dhan 3 isbuuc ee inagu soo aadan.
← Madaxweynaha dalka Zambia oo markale dib loo soo dortay
Isbahaysiga Jubilee oo la weydiiyay in ay sheegan halka ay ka keenen lacagaha ay u adeegsanaayan in ay ku mideeyan xisbiyada dalka ka jiro →